Aaska wariye C/salaan Xiis oo maanta ka dhacay qabuuraha Sh Suufi ee Muqdisho – SBC
Aaska wariye C/salaan Xiis oo maanta ka dhacay qabuuraha Sh Suufi ee Muqdisho
Maanta magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya gaar ahaan Qabuuraha Sh Suufi waxaa lagu aasay Alaha u naxariistee wareye C/salaan Sheekh Xasan xiis oo Maalin nimadii shalay uu dil u geystay nin ka tirsan ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya .
Aaska Allaha u naxariistee C/salaan Sheekh Xasan waxaa goob joog ka ahaa wariyeyaasha ka howl gala Magaalada Muqdisho, oo muujinayay sida ay uga xun yihiin dilkan loo geystay wareye xiis isalamarkaana ku dhaqaaqay in ay qaataan astaamo muujinaya qiiro sida in wariye yaasha gabdhaha ahi ay madaxa ku xirteen maro cad halka ragana ay ku xirteen maro guduudan.
Sidoo kale Waxaa xusid mudan in Aaska ay ku sugnaayeen xubnaha sar sare ee Warbaahinada Muqdisho, warbaahinta HornCable ee uu ka shaqeynayay wariyuhu Mulkiilaheeda iyo weliba Agaasima yaasheeda magaalada Hargeysa iyo Muqdisho, iyo weliba xildhibaano ka tirsan DKMG ah.
Dhamaan dadkaasi ayaa waxay muujinayeen sida ay ugu xunyihiin geerida walaalkood iyagoona sheegay in C/salaan Sheekh Xasan xiis uu ka baxay dhamaan Saxafiyiinta iyo weliba umada islaamka iyagoona Alle uga baryay naxariistii jano in uu siiyo.
Hadalo kala duwan oo ay halkaasi ka soo kala jeediyeen madaxdii isugu timid sida madaxda Tv-ga Horncable waxaa ay ugu baaqeen Dowlada KMG ah saraakiisheeda sar sare in si deg deg ah loosoo qabto cidii geysatay dilka wariyaha lana marsiiyo talaabada ku haboon.
Dhinaca kale Madaxweynaha DKMG ah ayaa isna ka hadlay arinta Dilka wariye wareye C/salaan Sheekh Xasan xiis isagoo la hadlayay warbaahinta Muqdisho ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta lagu soo dhigo doono shacigana la marsiindoono dadkii ka dambeeyay dilka wariyaha .
Aaska wariyaha Ayaa u dhacay si wanaagsan waxaana wariye yaashii ka soo qeyb galay iyo weliba dhamaanba dadweynihii iyo eheladii wariye wareye C/salaan Sheekh Xasan xiis ka muuqaneysay sida ay ugu xumaadeen dilka loo geystay islamarkaana halkaasi ilaahey uga baryay in uu janadii fardowso ka waraabiyo.
samiira mursal says:
mawaxay noqotay inla laayo cidkasta oo kahadasha siyaasada maxase lagugalay wariyaayaasha ,waxaan kacodsanayaa dhammaan shacabka gaar ahaan wariyayaasha inay ka banaan baxaan falalkaasi taasi waa tiilabaad horay ayay ciidamada dawlada iyo kuwa taageersani ay ugu dileen wariye udhashay malaisia